महन्थ ठाकुरसहित १३ सांसदलाई भारतीय दूतावासको रात्रिभोज, के पाक्दैछ खिचडी ? - Himali Patrika
महन्थ ठाकुरसहित १३ सांसदलाई भारतीय दूतावासको रात्रिभोज, के पाक्दैछ खिचडी ?
हिमाली पत्रिका २६ फाल्गुन २०७७, 7:29 am
काठमाण्डु। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरुका लागि भारतीय दूतावासले रात्रिभोज दिएको छ ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल लगायत १३ सांसद मंगलबार साँझ लैनचौरस्थित दूतावासमा राजदूत विजयमोहन क्वात्राले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी भएका हुन् । नयाँ सत्ता समीकरणका विभिन्न विकल्पबारे चर्चा चलिरहेका बेला जसपा सांसदहरुलाई दूतावासले रात्रिभोज दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सत्तासमीकरण गरेर जाने पक्षमा खुलिसकेका छन् । ओलीले संसद विघटन गर्दा मौन समर्थन गरेका ठाकुर अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरेसँगै ओलीसँग सत्ता गठबन्धन गरेर जाने मनस्थितिमा छन् ।
उनले डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई सुइँको नदिई एमालेसँग सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको कार्यदल गठन गरेको मंगलबार मात्र खुलासा भएको थियो ।
जसपा कार्यदल र एमाले कार्यदलमा रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच भित्रभित्रै केही चरणका वार्ता भइसकेको खुलासा कार्यदलकै सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले गरेका छन् । यद्यपि आफूहरुले सत्ता समीकरणका विषयमा नभई सांसद रेशम चौधरीमाथिको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि एमाले कार्यदलसँग वार्ता गरेको दाबी गरेका थिए । यद्यपि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न एमालेले किन कार्यदल गठन गर्ने विषय आफैंमा अपत्यारिलो हो । ठाकुर र ओलीबीच जसपा सांसद चन्दा चौधरीलाई रिक्त उपसभामुखको जिम्मेवारी दिनेबारे करिब अन्तिम सहमति जुटिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण खारेज गरेसँगै ती दुई पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ ।
त्यस्तोमा ओलीले जसपालाई सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो पद सुरक्षित गर्न खोजेका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीको पद जोगिन बहुमत अर्थात १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमाले एक्लैको १ सय २० सांसद छन् । ओलीलाई अपुग हुने १८ सांसद मात्र हो । राजपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षबाहेकको समर्थन लिन सके भने पनि ओलीले पद जोगाउन सक्नेछन् ।